मेयर भन्नुहुन्छ, ‘हात्तीपाइले औषधी धेरै खुवाउनुस्, पुरस्कृत हुनुस्’ – sunpani.com
मेयर भन्नुहुन्छ, ‘हात्तीपाइले औषधी धेरै खुवाउनुस्, पुरस्कृत हुनुस्’
नेपालगञ्ज – नेपालगञ्जका मेयर डा. धवलशमशेर राणाले हात्तीपाइले रोगविरुद्धको अभियानमा धेरै जनालाई औषधी खुवाउने वडालाई पुरस्कृत गर्ने बताउनु भएको छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आयोजना गरेको हात्तीपाइले रोगविरुद्धको आम औषधी सेवन अभियानअन्तर्गत स्थानीय तह स्तरीय योजना तर्जुमा तथा बहुनिकाय गोष्ठीमा बोल्दै मेयर डा. राणाले भन्नुभयो, ‘८५ प्रतिशतभन्दा बढी औषधी सेवन गराउने वडाको बजेट थप गरिदिन्छु ।’
मेयर राणाले ६५ प्रतिशत भन्दा कम औषधी खुवाउने वडालाई दण्डित गर्ने बताउनुभयो । दण्ड के दिने भन्ने चाहि मेयर राणाले खुलाउनु भएन । नेपालगञ्जमा हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधी खानेको संख्या न्यून हुँदा जिल्लामै अभियान असफल हुँदै आएको छ । मेयर राणाले जनप्रतिनिधिहरु उपस्थित भएको गोष्ठीमा भन्नुभयो, ‘तपाईहरु औषधी खुवाउन लाग्नुस् । जब जनता नै रोगले मर्छन् भने बाटो बनाएर के गर्नुहुन्छ ?’
नेपालगञ्जको वडा नंं. ३ मा गतवर्ष ६ प्रतिशत, ७ नम्बर वडामा १२, ८ नम्बर वडा र ११ नम्बर वडामा १३-१३ प्रतिशत मानिसले हात्तीपाइले रोगविरुद्धको औषधी खाएको तथ्यांक देखाइएपछि मेयर डा. राणाले पुरस्कृत र दण्डितको कुरा गर्नु भएको थियो ।
माघ २५, २६ र २७ गते बाँकेमा दशौंपटक अभियान चल्दैछ ।
गतवर्ष जिल्लामा ५४.९८ प्रतिशतले औषधी खादा नेपालगञ्जको कभरेज ४० प्रतिशत थियो । बाँकेमा सन् २०११ देखि हात्तीपाइले रोगविरुद्ध अभियान चलिरहेको छ । पहिलो वर्ष ८५.७४ प्रतिशत कभरेज थियो । त्यसपछि क्रमशः ४७.४३, ६३.०२, ६७, ७१, ६५, ६७.१३, ६५.८९ र ५४.९८ प्रतिशतले औषधी खाएका थिए ।
अभियानको दशौं वर्ष चलिरहदा दश प्रतिशत नै रोगी घटेका छन् । जिल्लामा अहिले १० प्रतिशत रोगी रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका फोकलपर्सन दुर्गा गौतमले जानकारी दिनुभयो । हात्तीपाइले अभियान चल्नुअघि जिल्लामा २१ प्रतिशत रोगी थिए ।
गोष्ठीमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डिल्ली पोखरेल, डा. खगेन्द्र शाह, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका अधिकृत अंगद शाहीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।